Zencastr: Mfe Dekọọ Podcast Ajụjụ Ọnụ Podcast Na Ntanetị | Martech Zone
Tọzdee, Machị 2, 2017 Fraịde, Machị 3, 2017 Douglas Karr
Otu enyi na onye isi okike nke ihe niile na - eme Podcast bụ Jen Edds site na Brassy Mgbasa Companylọ Ọrụ. Anaghị m ahụ ya anya ọtụtụ mgbe, mana mgbe m mere ya, ọ na-achịkarị ọchị. Jen bụ otu onye nwere ọgụgụ isi - ọ na-atọ ọchị, ọ bụ ọkaibe n'egwú na onye ọbụ abụ, ọ bụkwa otu n'ime pọdkastị nwere ahụmịhe m maara. Yabụ, ọ bụghị ihe ijuanya mgbe ọ kesara m ngwa ọrụ ọhụụ nwere ike ịmasị gị - Onyekachi.
Ọ bụrụ na ị bụ onye agha ochie pọdkastị, ohere nwere ike ịbụ na ị nwere igwekota bọọdụ na nnukwu igwe okwu na igwe okwu. Ọ bụrụ na ị bụ pọdkastị ọhụrụ, ị nwere ike inwe igwekota dijitalụ. Ihe mgbagwoju anya na-amalite mgbe ịchọrọ ịbata ndị ọbịa dịpụrụ adịpụ. Anyị na-ekike anyị Indianapolis Podcast studio na Mac Mini na di na nwunye na USB ọdịyo ihu iji nweta Skype ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ọdịyo n'ime anyị igwekota.
Ọ bụ ezie na nke ahụ na-edozi teknụzụ, ị ga - eji waya gị igwekota gị ma ọ bụ mmemme gị igwekota dijitalụ iji mepụta ndị nọ n’ime ụlọ gị na bọs gakwuuru ndị na - ahụ maka ntanetị. Ma ị ga - ahụrịrị na ịchighachi olu onye ọbịa gị ma ọ bụghị ya, ndị ọbịa gị ga - anụ ụda olu. Ọbụghị naanị na ị nwere nsogbu ndị ahụ, mana ọtụtụ mmemme nkwukọrịta n'ịntanetị (dị ka Skype) na wedata ọdịyo. Ọ bụ ihe dị ka ịnụ ka mmadụ na-akpọ redio na ekwentị ha.
Nwetara ihe niile ahụ? Ee… ọ na-abụ oke nkụda mmụọ oge ụfọdụ. Mụ na ndị obodo rụkọrọ ọrụ Igwe injinị ọdịyo Brad Shoemaker na ndị injinia Behringer iji nweta ya niile na-arụ ọrụ nke ọma ma anyị anwalewo ụyọkọ nke usoro ntanetị maka ndekọ ntanetị dị ọcha.
N'ezie, ịchọghị nke ọ bụla na nke a kemgbe Onyekachi dị ebe a! Ọ bụ ezie na enwere nyiwe ntanetị ndị ọzọ maka ịdekọ - dị ka BlogTalkRadio (anyị hapụrụ n'ihi na anyị enweghị ike ịdekọ ọdịyo dị mma n'ịntanetị), Zencastr na-enye elu-edu ndekọ ma wuo ya maka pọdkastị nke nwere ike inwe ọtụtụ ndị ọbịa si ebe dị iche iche.
Zencastr dị ka ịnwe ihe ndekọ na igwe ojii, ọbụnadị nwere ikike ịgwakọta nwere oke:
A Iche iche Track kwa Ọbịa - Zencastr na-edekọ olu ọ bụla na mpaghara ya na-enweghị atụ. Agaghị ahapụ ndị ọzọ n'ihi njikọ ọjọọ. Enweghị mgbanwe ọ bụla na mma n'oge ngosi ahụ. Ọ dịghị ihe ọ bụla ma ọ bụ kristal doro anya.
Record na Lossless WAV - Emebila ịdị mma gị. Zencastr na-edekọ ndị ọbịa gị na 16-bit 44.1k WAV na-enweghị atụ ka ị wee nweta ọdịyo kachasị mma iji rụọ ọrụ.
Soundboodu maka Edezi Ndụ - Fanye ntinye, mgbasa ozi, ma ọ bụ igwe okwu ndị ọzọ ka ị na-edekọ. Nke a na - echekwa gị oge ọ ga - ewe iji dezie ndị a n'oge nrụpụta.
Wuru na-VoIP (Voice karịrị IP) - Enweghị mkpa iji ọrụ ndị ọzọ dịka Skype ma ọ bụ Hangouts. Nwere ike olu nkata gị ọbịa ozugbo site Zencastr.
Mbugharị akpaaka - N'ịwa otu mbuaha track na curated ọdịmma nkwalite etinyere ka ndekọ gị n'ime a ọkachamara mix njikere maka ibipụta akwụkwọ.
Igwe ojii Drive - A na-enyefe ihe ndekọ gị na akpaghị aka na akaụntụ Dropbox gị maka idezi na ịkekọrịta. Google Drive na-abịa n'oge adịghị anya.
Hey… ma ọ bụrụ na ị ka na-amalite, Jen etinyela usoro zuru ezu malite pọdkastị gị nke ahụ bụ ihe kwesịrị!
Brassy Broad's Brass Tacks Pod-Klas
Tags: behringerigwekota dijitalụigwekotaPodcastingzencastr